आईन्स्टाइनको भन्दा बढी दिमाग चल्ने नेपाली युवा हुन् विजय शाही? यस्तो छ उनको अनौठो प्रतिभा – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Video/आईन्स्टाइनको भन्दा बढी दिमाग चल्ने नेपाली युवा हुन् विजय शाही? यस्तो छ उनको अनौठो प्रतिभा
यसभन्दा अगाडिका विश्व रेकर्डधारी अर्पण शर्माले एक मिनेटमा ४२ वटा शब्द बोलेर विश्व रेकर्ड बनाएका थिए । शाहीले उनको रेकर्डलाई उछिनेपछि विश्व रेकर्डमा शाहीको नाम लेखिएको छ । भुजीलाई कालीकोटका विजय शाहीले उछिनेर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि नासाले बोलाएर प्रमाणपत्र दिएको छ काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।